Ukugaya Amasondo Nokusika I-Disc Factory, Abahlinzeki - China Ukugaya Amasondo Nokusika AmaDiski Abenzi
TAA isondo lokugaya idayimaneisetshenziselwa ukusika nokugaya i-ductile cast iron, i-Gray Cast iron, i-cast iron, i-extrudate yensimbi, ukhonkolo oqinisiwe, ingilazi yefayibha nezinto zokuphikisa. Umkhakha omkhulu osebenzayo yi-foundry, imishini, ukwakha umkhumbi nokulungisa, ukwakha, ukucubungula okuyinhlanganisela, ukuqaqa izimoto, ukutakula okuphuthumayo, njalonjalo.
I-TAA disc cutting disc isetshenziselwa ukusika nokugaya i-ductile cast iron, i-Gray Cast iron, i-cast iron, i-extrudate yensimbi, ukhonkolo oqinisiwe, ingilazi yefayibha nezinto zokuphikisa. Umkhakha omkhulu osebenzayo yi-foundry, imishini, ukwakha umkhumbi nokulungisa, ukwakha, ukucubungula okuyinhlanganisela, ukuqaqa izimoto, ukutakula okuphuthumayo, njalonjalo.
I-TAA disc cutting discisetshenziselwa ukusika nokugaya i-ductile cast iron, i-Gray Cast iron, i-cast iron, i-extrudate yensimbi, ukhonkolo oqinisiwe, ingilazi yefayibha nezinto zokuphikisa. Umkhakha omkhulu osebenzayo yi-foundry, imishini, ukwakha umkhumbi nokulungisa, ukwakha, ukucubungula okuyinhlanganisela, ukuqaqa izimoto, ukutakula okuphuthumayo, njalonjalo.